Guddoomiye Muudeey “uma baahnin warbaahinta madaxabanaan” – War La Helaa Talo La Helaa
By Xuseen Madoobe	 On Oct 19, 2019
Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee golaha Shacabka Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muudeey ayaa weriyaasha ka socda warbaahinta madaxbanaan ee dalka u sheegay in aan looga baahneen tabinta fadhiyada Golaha Shacabka ee BFS.
Warkan oo horay u soo baxay ayaa lagu sheegay iney gadaal ka riixeyso madaxtooyada Soomaaliya,waxaana kaliya loo ogol yahay sida warar ay sheegayaan tebinta wararka golaha Shacabka warbaahinta Dowladda oo isugu jira Raadiyaha,Tv-ga iyo Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed ee SONNA.
Qaar ka mid ah Wariyeyaasha magaalada Muqdisho oo dhowaan shir jiraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay iney caburin kala kulmayaan Dowladda Federaalka,islamarkaana loo diiday illihii ay xogta wararka ka heli jireen.
Dowladda haatan dalka ka talisa ayaa caburin iyo caga-jigleyn xooggan ku heysan Wariyeyaasha madaxa banaan ee doonaya iney xog ka helaan xafiisyada Dowladda.
XOG:MD Farmaajo oo sameystay qorshe mudo kororsi usameyn karo xilkiisa iyo damaca cusub…